Tababare Arsene Wenger ayaa sheegay in wax dalab ah uusan ka helin kooxna oo ku aadan Robin van Persie, inkastoo la soo sheegayo inay dalabyo u direen kooxda kooxaha Manchester United, Manchester City iyo Juventus. (Daily Mirror)
Tababaraha kooxda Real Madrid Jose Mourinho ayaa ugu baaqay Tottenham inay Luka Modric u ogolaadaan inuu u dhaqaaqo kooxda heysata La Liga ee Los Blancos. (Daily Mirror)
Kubadsameeyaha kooxda Real Madrid Nuri Sahin ayaa lagu wadaa inuu si amaah ah ugu biiro koox weyn oo ka dhisan Premier League. Inkastoo aan la magacaabin kooxda. (Daily Mirror)
Kooxda heysata horyaalka Serie A ee Juventus ayaa soo gabagabeysay xiisihii ay u heysay ciyaaryahanka Arsenal Robin van Persie, taasoo ka dhigeysa in haatan dagaalka ay isagu soo hareen Manchester City iyo Manchester United. (Daily Mail)
Liverpool ayaa u sheegtay qiimaha ciyaaryahan Andy Carroll kooxaha xiileysanay, 2 milyan ginni oo haatan amaah lagu qaadanayo iyo 14 milyan ginni oo si joogta ah loogu iibsanayo xagaaga soo socda. Ciyaaryahanka reer England ayaa lala xiriiriyay inuu ku laabanayo kooxdiisii hore ee Newcastle, waxaa sidoo kale doonaya West Ham iyo Fulham, lakiin waxa kaliya oo uu xiiseynayo waa koox ka ciyaareysa yurub xilli ciyaareedkan. (The Sun)
Manchester City ayaa qarka u saran inay 24 milyan ginni ku soo xerogeliso ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Roma Daniele De Rossi. (Daily Star)
Tottenham ayaa ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo xiddiga kooxda Swansea Joe Allen, kaasoo sidoo kale lala xiriiriyay kooxda Liverpool. (Daily Star)
Newcastle ayaa dib u soo cusbnooneysiineysa xiisaheeda ciyaaryahan Ashley Williams oo ah daafaca dhexe ee kooxda Swansea iyo xulka Wales. (Daily Mail)
Liverpool iyo Arsenal ayaa dagaal kula galaya kooxda Lyon oo ku aadan ciyaaryahan Mamadou Sakho, daafaca kooxda Paris Saint-Germain. (talkSPORT)
Ciyaaryahan Kaka ayaa bartanka kaga jira xaalad jahwareer, ka dib markii Jose Mourinho uu ciyaaryahanka reer Brazil geliyay xaalad iga war sug ah, iyadoo AC Milan ay diyaar u tahay inay soo ceshato xiddigeedii hore. (Gazzetta dello Sport)
Inter Milan ayaa awoodeeda oo dhan isagu geyneysa sidii ay ku soo xerogelin laheyd xiddiga reer Brazil ee ka qeybgalaya ciyaaraha Olimbikada ee kooxda Sao Paulo Lucas Moura, inkastoo ay tartan kala kulmayaan kooxda horyaalka Ingariiska ee Manchester United. (Gazzetta dello Sport)
Inter Milan ayaa ka iibisay ciyaaryahan Luc Costaignos kooxda Fc Twente, isagoo ku wareegaya 6 milyan euro, sida uu xaqiijiyay ciyaaryahanka. (La Gazzetta dello Sport)
Xaalada ciyaarahanada Julio Cesar iyo Giampolo Pazzini ayaa ah mid aan la hubin, ka dib markii Inter ay ka saartay kooxda ay u magacowday inay ka qeybgaleyso isreebreebka Europa League. (Gazzetta dello Sport)
Ciyaaryahanka weerarka ugu ciyaara Milan Robinho ayaa meesha ka saaray wararka sheegaya inuu xagaagan ka tagayo San Siro, isagoo carabka ku adkeeyay in sannadkan uu yahay sannadkiisii uu isku muujin lahaa taagerayaasha Milan. (Corriere dello Sport)
Fiorentina ayaa ku celisay mar kale in xiddigeeda Stevan Jovetic inuusan iib aheyn, inkastoo Juventus lala xiriirinayo islamarkaana uu ciyaaryahan shaqsi ahaantiisa doonayo inuu ka tago Viola xagaagan. (Gazzetta dello Sport)
Waxaana sidoo kale Fiorentina ay suuqa ugu jirtaa weeraryahan cusub, iyadoo doonaya inay soo xerogeliyaan midkood weeraryahanka Arsenal Marwan Chamakh ama weeraryahanka Roma Marco Borrierlo. (Gazzetta dello Sport)
Real Madrid ayaa go’aansatay inay qaboojiso xiisaheeda kubadsameeyaha Tottenham Luka Modric, waa xeelad ay doonayaan inay qaboojiyaan xaalada kacsan ee kala dhaxeysa Tottenham oo ay u arkaan saaxiib. (Marca)
Lakiin wargeyska kale ee ka soo baxa Madrid AS ayaa qoreysa sheeko taas ka duwan, waxaana ay dhankooda sheeganayaan in la dardargeliyay wadahadaladii Tottenham iyo Real Madrid ee ku aadanaa saxiixa ciyaaryahan Luka Modric. (AS)
Nuri Sahin ayay u badan tahay inuu ka tago Real Madrid xilli ciyaareedkaan, isagoo la filayo inuu amaah ugu ciyaaro koox ka mid ah kooxaha ugu waa weyn Premier League. Waxaana uu Santiago Bernabeu ku soo laaban doonaa dhamaadka xilli ciyaareedka 2012-13. (Marca)
Kooxda Barcelona ayaa u soo jeesatay Carles Puyol mar hadii ay qandaraaska u kordhiyeen Javier Mascherano, waxaana halyeeyga difaaca ah uu qandaraaskiisa ku eg yahay xagaaga soo socda, iyagoo doonaya inay qandaraaskiisa isna u kordhiyaan (Marca)